लकडाउनमा कलाकार तथा निर्देशक ग्याम्जो लामाको "बडो बिजोग" ! - StarPratika.com
लकडाउनमा कलाकार तथा निर्देशक ग्याम्जो लामाको “बडो बिजोग” !
९ महिना अगाडि / ७७१ पटक हेरिएको
काठमाडौं । कोरोना भाइरस Covid -19 ले हाँस्य श्रृङ्खलाहरुलाई असर पारी रहदा बडो बिजोग टेलिसिरियलले भने अहिले निकै चर्चा बटुली रहेको छ ।कलाकार तथा निर्देशक ग्याम्जो लामाले भने मौकाको फाइदा उठाउदै बडो बिजोग निर्माण गर्दै आएका छन, बडो बिजोग निर्माण गर्नमा उनको छुट्टै कथा छ। उनको भनाई जस्ताको तस्तै : “कलाकार बन्न मैले धेरैलाई ज्यु ज्यु गर्नु परेको थियो धेरैलाई मासु, रक्सी, चुरोट खुवाउनु पर्यो। नाम नतोकौ, पैसाको डिमान्ड पनि गर्यो त्यो पनि दिए, शूटिङ जादा दिनभर लाइट कि त बूम समाउन पर्थ्यो ।आफ्नो बल्ल बल्ल पालो आउथ्यो त्यो नि पासिङ सिनमा कि त कोहि कलाकार को पछाडि टाउको हल्लाउने कि त “हुन्छ” भन्ने मात्र डायलग हुन्थ्यो। फेरि आफुलाइ न त कथा मन पर्थ्यो न त निर्देशन नै।
त्यै पनि मोबाइल मा रिचार्ज कम भए जस्तै पैसा दिएको केही समय पछि त्यै पनि कम हुँदै आउथ्यो । दुखको कुरो यो फिल्ड पैसामा चलेको छ, १ हजार देखि लाखसम्म केहि नजानेको मान्छेसंग पैसा उठाउने गर्छ र पैसाको आधारमा सिन आउने गर्छ। मलाइ लाग्छ यो क्षेत्र दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको छ यसरी पैसा उठाई उठाई ठग्नेहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने प्रावधानको धेरै आबश्यकता देखिन्छ। शूटिङ स्पटलाई नै प्रशिक्षण केन्द्र बनाएको छ यसो गर्दा नया कलाकारले पाउने केही त हैन मात्र पैसा स्वाहा ! सिक्ने क्रममा चाँहि मलाई भाग्यले अलि साथ दियो, मैले भने टाढैबाट धेरै सिक्ने मौका पाए । मेरो च्याउ फार्म थियो, धन एकातिर मन एकातिर भयो शुटिङले । कोरोना आयो अहिले डामाडोल भएको छ । घर बसिरहदा बोर लाग्यो मैले साढे ४ बर्ष एउटा आइ.एन.जि.ओ मा काम नि गरेको थिए मिडिया म्यानेजर को रुपमा । मलाइ क्यामेराको राम्रो ज्ञान छ, तर बिडम्बना क्यामेरा र ल्यापटप दुबै बिग्रेको छ । त्यसैले मोबाइल बाटै खिची मोबाइल बाटै इडिट गर्दै सुरु गरे, आफ्नै साथिभाइलाई लिएर।
अहिले धेरै दुख गरी अघि बढि रहेका छौ । साथिभाई हरु धेरै खुशी छन बिना लगानी बिना झन्झट खेल्न पाएकोमा। मैले शुटिङ्को शिलशिलामा धेरै अग्रज कलाकारहरु संग थोरै समयमा धेरै काम गर्न पाएको छु, त्यसै क्रममा मैले जनक राज अधिकारी दाइ संग काम गर्ने मौका नि पाएको थिए। उहाँ एक सफल छायांकार हुनुहुन्छ नेपाली सिनेमा जगतमा । खुशीको कुरा हाम्रो घर संगै परेछ, पछि चिनजान भयो घर नजिक भएकाले मैले गरेको गतिबिधि उहालाई सुनाए । घर संगै भएकाले उहाको ब्यस्तताको बावजुद समय मिलाइ दिन आग्रह गरे । अहिले उहाले मलाइ धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ ।” बडो बिजोग को अबधारणा कसरी आयो भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिदै लामाले भन्नुभयो “देशमा यत्रो लकडाउन चलिरहेको बेलामा सबैको समय ब्यतित र मनोरञ्जन गराउने साधन सामाजिक सन्जाल नै थियो । सही समय यही हो जस्तो लाग्यो अनि युट्युब लाई माध्यम बनाए । देशमा भैरहेको समस्या लाई उजागर गर्दै सन्देशमुलक तथा हास्यश्रृङ्खला नै उत्कृष्ट रहने निर्णयमा पुगे । किनकी बिना कमेडि, सिरियलमा दर्शकको मन जित्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो अहिलेको परिवेशमा ।”
नयाँ दर्शकहरुलाई बडो बिजोग को बारेमा केहि भन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्दा उहाले भन्नुभयो “आम दर्शक लाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बडो बिजोगको हरेक एपिसोड को कथावस्तु तपाईं हाम्रो वरिपरी हुने बिभिन्न घटनाक्रमहरु लाई आधार मानेर तयार परिएको हुन्छ, जसले गर्दा हेर्ने दर्शकहरुलाई यसभित्र को कुनै पात्रले निर्वाह गरेको भूमिकामा कतै आफु नै हो कि भन्ने महशुस हुन सक्छ । साधारण भाषा र बोलिचाली को कारण ले हरेक पिडीलाई बुझ्न कठिनाई हुनेछैन । समग्रमा भन्नु पर्दा एउटा मनोरञ्जनको प्याकेज नै हो बडो बिजोग । यस्को हरेक श्रृङ्खलाले तपाईंहरुको मन जित्नेछ ।” लामा संगै उनका साथिभाई को सहयोगबाट निर्माण भई रहेको टेलिचलचित्र बढो बिजोग मा ग्याम्जो लामा, शंकर तामाङ, रबि तामाङ, मिलन तामाङ, जे.बि राम, क्युबा मोक्तान, नितेश तामाङ, शितल बिश्वकर्मा, हरि ढकाल , कबिता भट्ट, नर्मान गुरुङ, बिष्णु प्रसाद भट्ट लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गर्दै आएका छन् । समाजमा हुने कुरिति अनि सबैको बिजोग लाई बढो बिजोग बनाइ ब्याङ्ग्यात्मक तरिकाले प्रहार गरिएको यस श्रृङ्खलामा प्रताप स्याङतानले शिर्ष गीतमा स्वर तथा संगीत दिएका छन् । हाल बढो बिजोगको सातौ संस्करणसम्म युट्युबमा उपलब्ध भैसकेको छ। बढो बिजोग टाइप गरि युट्युबमा सजिलै हेर्न सकिन्छ। अहिलेका व्यस्त संगै अग्रज,अनुभबी छायाँकार जनक राज अधिकारीको छायाँकन रहेको छ भने जनक राज अधिकारी कै सम्पादन रहेको छ, लेखन सहयोगी मा डिल्लिराज तामाङ रहेको छ । थोरै समयमा धेरै सिकेर निर्देशक बनेका प्रतिभाशाली युवा कलाकार ग्याम्जो लामा यस बढो बिजोक का कथाकार संगै निर्देशक पनि हुन् ।